Asia Atsimo-Atsinanana: Fifanolanan-kevitra sy voina teo amin’ny taona 2008. · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Janoary 2009 15:53 GMT
Tamin’ny fampisehoana farany teo (Southeast Asia: Newsmakers of 2008)” no nanoratako ny momba ireo zava-nitranga manandanja lehibe indrindra izay niseho tao Asia atsimo-atsinanana. Amin’ity lahatsoratra ity kosa no hanasongadianako tantara hafa nahatonga fifandirana. Tanjona hafa ny hanangonana sy hanasokajiana ny lahatsora-mpifandraisana mipetraka eo an-kavanan’ny Global Voices, izay mikasika ny faritra
Andao ary isika hiresaka momba ireo lohateny nifandirana: Fitaovam-pananahana. Tafiditra tao anatin’ny korotana ara-pitondra-tena ny mpanao politika Malezianina: mpanao politika iray nanao firaisana tao an-trano fandraisam-bahiny no voaray tao anaty horonan-tsary; ary ministry ny cabinetra teo aloha no voapanga nanolana vehivavy iray.
Nanoratra momba ny olana amin’ny fanampiasana ny fivaviana sy ny vehivavy entina hampisongadinana ny dokam-barotra eo amin’ny Televizionina ny mpanoratra Tharum an’ny GV avy ao Cambodia. Nangataka ny fialan-tsiny avy amin'ny BBC ny mpanao lalana Filipianina iray mikasika ny fandaharana tora-kehy(fampihomehezana) izay nampiseho vehivavy mpiasa an-trano filipianina “ho toy ny fitaovana fampimehezana ara-pitondratena.” Hita ihany koa tao Filipina fa tratra nivanitika tao an-tranom-padidiana ireo dokotera nandritra ny fotoana nanesorana ilay tavoahangin-dranomanitra tafiditra tao anatin’ny vodin'ilay marary (fitombenana).
Nisy ihany koa ny olana ara-panambadiana. Namaritra tsikera momba ny filazana ny fihenam-bidim-bodiondry (vidin’ny vehivay ho vadiana)ny lahatsoratra nivoaka tao Singaporo. Najanon’I Cambodia ny fanamboarana ny taratasim-pisoratam-panambadian'ireo olom-pireneny amin'ny vahiny mba hampihenana ny fanodikodinan’olona mety hitranga
Nanome lalana ny mpanolotsaim-pirenenana Fatwa an’I Malaysia izay milaza fa ny endrika ivelan'ny taranja yoga dia ekena fa ny singa ara-panahy entiny kosa no rarana. Nanao fiantsina fihetsiketsehana ao indonezia momba ny “hafatra entina manohitra ny silamo.” ny horonantsarin’ny Geert Wilders, Fitna
Mikasika ny fampandrosoana ny renivohitra dia mihevitra ny mpitoraka blaogy fa betsaka loatra ny toera-pilokana (casino) ao an-drenivohitry Cambodia. Mibosesika ny mpivarotra an-dalambe mamboka eny amin’ny lalam-ben’I Hanoi. Miresaka ny fanoheran’ireo tompon-trano Singaporo ny mba hananganan’izy ireo trano fatorian'ny mpiasa vahiny ny mpanoratra GV Angshah.
Voatatitra teny amin’ny faritra ireo toe-javatra maro mikasika ny fandikana ny fahafahan’ny mpanao Gazety. Voalazan’ I Caroline mpanoratry GV ny mikasika ny fisamborana ireo mpanao gazety roa tao Vietnam, ny helon’izy ireo tamin’izany dia ny fampisehoana ireo risoriso misy eo amin’ny masoivohon’ny governemanta. Ohatra iray hafa: nofohanan’ny fitondra-panjakana ny tatitra voatokan’ny mpahay toe-karena.
Lasa mpanao politika ny mpitoraka blaogy teratany Malaysian; lasa mpanao blaogy koa ny mpanao politika Malaysian. Efa nomena fampitandremana ny mety ho fikasana hamorona rotaka monohitra ny politika maloton’ny Malaysia ny mpitoraka blaogy. Niteny ny govenemanta fa tiany ny hinamanana amin'ny mpitoraka blaogy noho ny herin’ny toraka blaogy misy.
Nanohana ny andro fankalazana ny hetsika blaogy 2008 hiadiana amin’ny fahantrana ny mpitoraka blaogy Filipianina. Nitory teny tao amin'ny YouTube ny eveka Katolika tao Filipina. Nanangana blaogy ny vondron’ny mpifindra monina filipianiana mba hanerena ny govenemanta hanadihady ny antony nahafaty ny mpiasa Filipianina iray. Miraika amin’ny fandefasana hafatra anapitrisa mankany amin’ny Aung San Suu Kyi ao Myanmar ny programan’asan-gazety mpandray anjara The Twitter Suu, “mba ampahafantarana azy fa manana fanohanana maneran’izao tontolo izao izy”. Nitoraka blaogy ny tsy fankasitrahana manohitra ny orinasa mpanjifa Malaysianina ny be antitra teratany iray.
Ny fitorahana blaogy ao Vietnam dia fantatra fa fitaovana matanjaka ahafahana milaza hevitra. Mpitoraka blaogy Cambodianina no nankasitrahana ho mpahay raha eo amin'ny vaovaom-pirenena. Tao Myanmar, nisy mpanao gazety zokiolona nitsikera ny fihetsik'ireo mpitoraka blaogy maro. Mpitoraka blaogy Australian iray no lasa nalaza/nitodra ady hevitra tao Filipina rehefa nampiseho ireo hetsika mahamoafadin’ilay namany, mpanan-karena tao Manila.
Voninahitra no omena ireto mpikaraka ny fotoana ireto: Sabah Bloggers Gathering 2008, Mindanao Bloggers Summit, Twitter Saigon, Philippine Blog Awards, Pesta Blogger, BarCamp Malaysia, BarCamp Cambodia, Wordcamp Philippines.